१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:३८
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्ट निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको छ । यसले धेरै उद्योगी/व्यवसायीलाई हर्षित पनि बनाएको छ । हामी उद्योगी तथा राज्यकै लागि यो एकदमै खुसीको कुरा हो । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट बन्ने सिमेन्टलाई सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्नु.....
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०८:००
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा खोट लगाउने ठाउँ कहीँ छैन । अर्थात् सतही रुपमा भन्दा नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन । किनभने यसले मानव विकास, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता विकास, दिगो विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसैगरी गरिबी घटाई समानताको विकास गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने,.....
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट विकासका गतिविधिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र परिणाम दिने खालको हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, सरकारलाई अहिले खर्च गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारका अधिकार र कर्तव्य र जवाफदेही बजेटले बनाउनुपर्छ । खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ.....
विद्युत् महशुललाई लिएर पछिल्ला केही दिन यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मनमुटाब बढेको छ । प्राधिकरणले सुविधा उपभोग गर्ने तर शुल्क तिर्न अटेर गर्ने कुरा नियमसङ्गत नभएको भन्दै आएको छ, भने उद्योगीहरु सुविधै नलिई कसरी पैसा तिर्न सकिन्छ ? भन्दै आएका छन् । उद्योगीले लोडसेडिङको समयमा तालिकाभित्रै.....
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन असाध्यै राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ । तर, यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा यो सिस्टम एकदमै राम्रोसँग बनाइएको छ । योजना, बजेटिङ, एकाउन्टिङ, खर्च, रिर्पोटिङ, सार्वजनिक खरिद, अडिटलगायतलाई एकदमै राम्रोसँग बनाइएको छ । तर, खर्चमा सधै समस्या.....
२३ बैशाख २०७६, सोमबार १३:४०
कुनै एक व्यवसायमा निजीक्षेत्र सक्षम छ भने त्यो क्षेत्रमा सरकार जानुहुँदैन । सरकारका सयौं प्राथमिकता हुन्छन् । तर जलविद्युतमा निजीक्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ सरकार जानुपर्ने कारण के हो ? बुझ्न सकिएन । नेपालको निजीक्षेत्र १०० मेगावाटसम्मको नदीका बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) आयोजना बनाउन.....